ခရီးသည်တင်လေယာဉ်တွေအတွက် အသုံးဝင်တဲ့ စနစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ACARS စနစ်အကြောင်း - hotnewmyanmar.com
ခရီးသည်တင်လေယာဉ်တွေအတွက် အသုံးဝင်တဲ့ စနစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ACARS စနစ်အကြောင်း
June 2, 2022 - by zorrow - LeaveaComment
ACARS ( Aircraft Communications Addressing and Reporting System)
ဒီတခါတော့ ဒီနေ့ခေတ် ခရီးသည်တင်လေယာဉ်တွေအတွက် အသုံးဝင်တဲ့ စနစ်တစ်ခုအကြောင်း ဗဟုသုတအဖြစ် ရှာဖွေတင်ပြလိုက်ပါတယ်။
အဲဒီစနစ်ကို အတိုကောက် ACARS လို့ဖေါ်ပြပြီး အသံထွက်ကတော့ အေးကားစ့် ဖြစ်ပါတယ်။ သူက Digital data link အနေနဲ့ အလုပ်လုပ်ပေမဲ့ အင်တာနက်မလိုပဲ ရေဒီယိုလှိုင်းနဲ့ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။
VHF လို့ခေါ်တဲ့ very high omini bearing range frequency ကိုအသုံးပြုပြီး လေယာဉ်မှ မြေပြင် ဆက်သွယ်သတင်းပို့တဲ့စနစ် ဖြစ်ပါတယ်။ ထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီကတော့ အမေရိကန်ရဲ့ Aeronautical Radio Inc. Rockwell/ Collins ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ တစ်ခုပြောခြင်တာရှိပါတယ်။ တိုးတက်လာတာနဲ့အမျှ လေယာဉ်တွေရဲ့ system ခေါ် စနစ်တွေဟာလဲ ပိုမိုတိကျမှန်ကန်လာသလို ဘေးအန္တရာယ်ကင်းဖို့လဲ အသေးစိတ်ထည့်သွင်းပြုလုပ်လာကြတယ်ဆိုတာပါ။
လေယာဉ်ဟာ FMS ( Flight Management System ) လို့ခေါ်တဲ့ ပါတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများကို ကွန်ပြူတာအတွင်း ဒေတာထဲ့သွင်းတွက်ချက်စေပြီး ရလာတဲ့အဖြေပေါ် မူတည်ပျံသန်းစေတဲ့ စနစ်တစ်ခုလည်းရှိပါတယ်။ (နောင်အလျဉ်းသင့်ရင် ဒီ FMS အကြောင်း တင်ပြပါအုံးမယ်။)
ခုပြောတဲ့ ACARS စနစ်ကို အသုံးပြုပုံကလဲ ဒီ FMS ကွန်ပြူတာထဲကို ပိုင်းလော့က select လုပ်ဒေတာ ရိုက်ကာထဲ့သွင်းလိုက်ယုံပါဘဲ။ ဒီစနစ်ဟာ Close network တစ်ခုဖြစ်ပြီး လေယာဉ်နဲ့ မြေပြင်ဌာနတွေဖြစ်တဲ့ ATC ( air traffic control ) လေယာဉ်ဆီဌာန အင်ဂျင်နီယာဌာန အစရှိသဖြင့် ဆက်သွယ်ထားနိုင်ပါတယ်။အခု အလုပ်လုပ်ပုံကိုပြောပါ့မယ်။ ဒီစက်မှာ Down linkနဲ့ Up link ဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိပါတယ်။
ပိုင်းလော့က Down link ကို အသုံးပြုလိုက်ရင် စက်က စောစောက ဖေါ်ပြခဲတဲ့ဌာနတွေစီကို မက်ဆေ့ ပို့ပါတယ်။ မက်ဆေ့မှာလဲ လေယာဉ်အကြောင်းအပြည့်အစုံ အလိုအလျောက်ပါရှိပါတယ်။
လေယာဉ်ရဲ့ မှတ်ပုံတင်အမှတ် ( ဥပမာ XY-AAA)ဖလိုက်နံပါတ် (ဥပမာ UB 212 ) နောက်ပြီးခရီးသည်အရေအတွက် စသဖြင့်ပေါ့။ ဒီထဲမှာ လေယာဉ်စက်ချို့ယွင်းမှုအခြေအနေကို ထည့်သွင်းပို့မယ်ဆိုရင် မြေပြင်အင်ဂျင်နီယာတွေက ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီး လေယာဉ်ဆင်းသက်တာနဲ့ အချိန်မှီပြင်ဆင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ဒါမှမဟုတ် အရေးပေါ်လူနာပါလာကြောင်း ထည့်သွင်းမယ်ဆိုရင် လူနာတင်ကား ထမ်းစင်စသဖြင့် တာဝန်ရှိသူတွေက ပြင်ဆင်ချိန်ရပါတယ်။ အရေးပေါ်ကိစ္စ (ဥပမာ လေယာဉ် အပိုင်စီးခံရခြင်း ) ဆိုရင်လဲ မက်ဆေ့မှာပါတဲ့ ကုဒ်နံပါတ်ကိုကြည့်ပြီး အချိန်မီဖြေရှင်းဖို့ ပြင်ဆင်ထားနိုင်တဲ့အတွက် အလွန်အကျိုးရှိတဲ့ စနစ်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
ပိုင်းလော့ဟာ အသံလွှင့်ပြောစရာမလိုပဲ ဒီစနစ်နဲ့တိကျစွာ သတင်းပို့နိုင်ပါတယ်။ မြေပြင်က လက်ခံရရှိတဲ့သတင်းကို ပရင်တာနဲ့ ပရင့်ထုတ်ယူလို့လဲရပါတယ်။ ဒီထက်အကျိုးရှိတာက လေယာဉ်ဆီဖြည့်ဖို့ ကြိုတင်အကြောင်းကြားထားနိုင်တဲ့အတွက် အချိန်ကုန်သက်သာပါတယ်။
နောက်တပိုင်း Up link အချက်ပေးခြင်းပါ။ ဒါကလေယာဉ်ရဲ့ ထွက်ခွါချိန် အတိအကျ သတ်မှတ်နိုင်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။ လေယာဉ်ရဲ့ ဘီးအတင်အချစနစ် Landing gear system မှာ တပ်ဆင်ထားတဲ့ အာရုံခံကရိယာ ( Weight on Wheel )ကနေတဆင့် ACARS computer ကို ဘီးကြွချိန်မှာ အချက်ပေးပါတယ်။
ကွန်ပျူတာကလဲ မြေပြင်ထိန်းချုပ်စခန်း ATC ကို (ပိုင်းလော့က ခလုပ်ဖွင့်ထားတဲ့အတွက် ) သတင်းပို့ပြီးသား ဖြစ်သွားပါတယ်။ ဒီမက်ဆေ့ကပဲ လေယာဉ်ရဲ့ထွက်ခွာချိန် အတိအကျသတ်မှတ်ပြီး ဖြစ်သွားပါတယ်။
တကယ်လို့ ခရီးစဉ်တထောက်နားချိန်မှာ လေယာဉ်ဟာ စက်မှုဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းချက်ကြောင့် အင်ဂျင်နီယာများက ပြင်ဆင်ရမယ်ဆိုရင်လဲ ဒီစနစ်က ကူညီနိုင်ပါသေးတယ်။ အင်ဂျင်နီယာကပြင်ဆင်ပြီး လေယာဉ်ကောင်းမွန်ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာ log book ထဲမှာ လက်မှတ်ထိုးယုံနဲ့ ပိုင်းလော့က လက်မခံပါဘူး။
လေကြောင်းဆိုင်ရာဥပဒေအရ Certificate of Release to Service လို့ခေါ်တဲ့စာရွက်ပေါ်မှာ လက်မှတ်ထိုးထားပြီး log book ထဲညှပ်ထားတာတွေ့မှသာ လေယာဉ်ကို လက်ခံပါတယ်။
တကယ်လို့ စက်လဲကောင်း log book မှာလဲ လက်မှတ်ထိုးပြီး Certificate of Release to Service ကို အချိန်မီမပေးနိုင်ခဲ့ရင် လေယာဉ်ထွက်ခွာချိန်နောက်ကျမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကုမ္ပဏီအလိုက် လေယာဉ်နောက်ကျချိန်ကို မိနစ်နဲ့သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ စာရေးသူသိတဲ့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုဆိုရင် သုံးမိနစ်ထက် ပိုခွင့်မပြုပါဘူး။ ဒီလိုဖြစ်ခဲ့ရင် လေယာဉ်မှူးကို Certificate of Release to Service ကို လေယာဉ် တက်စီလုပ်နေချိန်မှာ ACARS နဲ့ လှမ်းပို့ပေးမဲ့အကြောင်း ညှိနှိုင်းပြီး အချိန်မီထွက်ခွာနိုင်အောင်လုပ်လို့ရပါတယ်။ (တက်စီ ဆိုသည်မှာ မထွက်ခွါမီ လေယာဉ်ကို ပြေးလမ်းထိပ်အထိ မောင်းနှင်သွားတာကို ဆိုလိုသည်။ ဤကားစကားချပ် )
ပိုင်းလော့ကတော့ ACARS ကိုခလုပ်ဖွင့်ထားဖို့ လိုပါတယ်။ မက်ဆေ့ဝင်လာလျှင် လေယာဥ်ပေါ်တွင် ပရင့်ထုတ်ယူနိုင်ပါတယ်။ တဆက်တည်း ပြောပြချင်တာကတော့ လေယာဉ်ကိုပြုပြင်မှု လုပ်ရတဲ့အကြောင်းပါ။
လေယာဉ်ရဲ့ပစ္စည်းတစ်ခု ချွတ်ယွင်းမှုဖြစ်လို့ အသစ်လဲရတယ်ဆိုပါစို့။ ပထမဆုံး ဖြုတ်တဲ့ပစ္စည်းရဲ့ part no., serial no., model no.ပြီးရင် တပ်မဲ့ပစ္စည်းရဲ့ part no. serial no. model no. Approved Certificate no. စသည့် နံပါတ်အားလုံးကို ကွန်ပျူတာထဲ ဒေတာသွင်းမှတ်သားရပါတယ်။
ပြီးရင်လဲ လေယာဉ်ကို ဘယ် manual ရဲ့ အခန်းဘယ်လောက်အရ functional check လုပ်တာလား? operational test လုပ်တာလား? စမ်းသပ်ပြီတွေ့ရှိချက်အကုန်လုံးကို ကွန်ပျူတာမှာ မှတ်တမ်းတင်ရပါတယ်။ဒီလို အချိန်လုပြီးလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်မှသာ လေယာဉ်အချိန်မီ ထွက်ရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ACARS နဲ့ဆိုင်တဲ့ ဓါတ်ပုံတချို့ကိုလဲ ဖေါ်ပြလိုက်ပါတယ်။ စာရှု့သူများ ကျေနပ်ကြလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ရင်း။
Knight News Team
Previous Article ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နဲ့ သမ္မတရာထူး နှစ်ခုလုံးကို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပေမဲ့ နိုင်ငံကနေထွက်ပြေးခဲ့ရတဲ့ အာဏာရှင်တစ်ဦးအကြောင်း
Next Article ရုရှားရဲ့ S-300 ဒုံးကျည်အကြောင်း